देशलाई संकट पर्न आँटेकाले तयारी हालतमा छौ भन्दै प्रधानसेनापतिले यी गम्भीर बिषयमा मुख खोले ! « Janaboli
देशलाई संकट पर्न आँटेकाले तयारी हालतमा छौ भन्दै प्रधानसेनापतिले यी गम्भीर बिषयमा मुख खोले !
काठमाडौ । सिके राउत लगायतका समुहको चलखेल र भारतिय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्ति प्रति नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुख खोलेका छन् । मौन बस्दै आएको सेनाले विखण्डनकारी र हतियारधारी समूहको सूक्ष्म जानकारी राखेको साथै आफ्नो भूगोलको बिरुद्धमा बोल्ने विदेशीहरुलाई समेत नजरअन्दाज गरीरहेको बताए । सरकारले चाहेको खण्डमा तयारी अवस्थामा रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ।
बिहीबार नेपाली सेनाले सुन्धारास्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सञ्चारकर्मीहरुबीच सवाल जवाफ भएको थियो। देशभित्र विखण्डकारी र हतियारधारी समूह निस्तेज पार्न सरकार लागिरहेको छ, यस विषयमा सेनाको धारणा के छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा सेनापति थापाले भने, ुविखण्डनकारी र हतियारधारी समूहबारे प्रहरी प्रशासनले हेरिरहेको छ। यो हाम्रो क्षेत्र परेको छैन। भोलि कस्तो किसिमको परिस्थिति निम्त्याउने हो भन्ने कुरामा भने सेना चनाखो छ। राज्यले सेना आवश्यक ठानेको अवस्थामा सेना तयारी अवस्थामा छ।
थापाले समस्याहरू राजनीतिक तहबाट नै समाधान हुने कुरामा विश्वस्त रहेको समेत जानकारी दिए। सेना संविधानको रक्षाको लागि भएकाले संविधानले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्ने जानकारी दिए। थापाले भारतमा भएको बिम्स्टेक राष्ट्रको अभ्यासमा सरकारको धारण अनुसार नै सहभागिता नभएको दावी गरे। सेनापति थापाले भने, नेपाल सरकारको धारणा अनुसार नै बिम्स्टेक राष्ट्रको संयुक्त अभ्यासमा भाग नलिएका हौँ।
सेनापति थापाले सेनाभित्र केही भ्रष्टाचार भइरहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै आफू सङ्गठन भित्रको भ्रष्टाचार हटाउन समेत लागि परेको जानकारी दिए। सेनाको एक्लो प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार हट्दैन। भ्रष्टाचार हटाउन समय लाग्छ। भ्रष्टाचारको जरैदेखि नै उपचार गर्न लागिरहेका छौँ, सेनापति थापाले भने। पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले हस्पिटल, पेट्रोल पम्प लगायतका क्षेत्र सञ्चालन गरेर व्यापार गर्न नखोजेको बताए। यस्ता क्षेत्र नाफामुखी नभएको दावी उनको रह्यो।
पशुपति शर्माको नाममा संसद बैठकमा जात्रा, कांग्रेसका यी सांसदबाट २५ हजार पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौं । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ गीतले संसदमा हंगमा गरेको छ । सोमबार बसेको
जीप दुर्घटनाबाट शसस्त्रका एसपीपछि सिडिओ गणेशप्रसाद भट्टराईको मृत्यु, घटना शंकास्पद
काठमाडौ । जीप दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते बनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएको
प्रचण्ड, देउवा र ओलीलार्ई महासंकट : गंगामायाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’ तान्ने
काठमाडौं । नेपालमा न्याय नपाएपछि गंगामाया अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायको लागी अपिल गर्ने
एउटा गीत सहन नसक्ने कस्तो दुई तिहाइको सरकार हो : कांग्रेस
काठमाडौं । ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गीत पछि अहिले नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुका बिचमा बहस